माधव नेपाललाई होमसिक जस्तै एमालेसिक हुन्छ: योगेश भट्टराई | Khabarpato
काठमाडौं, असोज ०१, २०७८
नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टी विभाजन गर्नेहरू एमालेमै फर्किने दाबी गरेका छन् ।
पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिले पनि विभाजनमा लागेकाहरूको मनमा एमाले नै रहेकाले मुल पार्टीमा फर्किने दाबी गरे । ‘जो विभाजन लाग्नुभयो, उहाँहरूमा टिप्पणी छैन । धेरै नेता, कार्यकर्ताको मनमा एमाले नै छ । अब माधव कमरेडले सपना देख्दा पनि एमाले नै देख्नुहुन्छ । उहाँलाई होमसिक जस्तै एमालेसिक हुन्छ । उहाँ यतै आउनुहुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘उहाँ एमालेमा फर्किनुको विकल्प छैन । असफल प्रयत्नतिर नजाऔँ । त्यसले कुनै शक्ति आर्जन गर्न सक्दैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गर्नेबाहेक कुनै काम छैन ।’
पार्टी पंक्ति र नेताहरूको सुझबुझका कारण विभाजनको असर खासै नपरेको उनले सुनाए । ‘जे कोसिस गर्‍यौँ, यसले विभाजनको असर निकै कम भयो । जति तल गयो, विभाजनको असर उति कम भयो’, उनले भने, ‘पार्टी विभाजन गर्नुहुुँदैन भन्ने एकताको पक्षधर साथीहरू एकजुट हुनुभयो । अझै अत्यन्त मिहिनेत गर्छौं । जहाँ घाटा लागेको छ, त्यसको पूर्ति गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता तानेर एमालेको क्षति पूर्ण गर्ने उनको भनाइ छ । ‘माओवादीका तल्लो तह निराश छन् । हामीले उनीहरूलाई एमालेमा आउन अपिल गरौँ’, उनले भने, ‘कांग्रेसका साथीहरूलाई पनि भनौँ । हिजो भोट नहालेकाहरूलाई पनि एमालेमा आकर्षित गरौँ ।’
भट्टराईले कांग्रेसले देशलाई विकल्प दिन नसक्ने भन्दै एमालेले बहुमत ल्याउने दाबी गरे । ‘आगामी चुनावमा पनि कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्दैन किनकि उसले कुनै विकल्प दिन सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘बहुमत ल्याउन सक्ने तागत एमालेसँग छ । राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि एमालेको बहुमत अनिवार्य छ ।’ विभाजनमा लागेका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई मूलघरमै फर्किन उनको आग्रह छ ।
उनले एमालेकै नेतृत्वमा आगामी निर्वाचन हुने दाबी गरेका छन् । अहिलेको सरकार असफल भएको भन्दै उनले एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नुपर्ने बताए ।
उनले एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ दलको धारणा स्पष्ट गर्न आग्रह गरे । ‘एमसीसीको बारेमा सत्तारुढ दलको धारणा के हो ? कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको धारणा के हो ? उहाँहरूको संसदीय दलले पास गरेको कहाँ छ ?’, भट्टराईले भने, ‘धारणा स्पष्ट गर्नुहोस् । एमसीसी के गर्ने हो ?’
सरकारका कारण बजेट होल्ड भएको र यसले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन ध्वस्त भएको उनको तर्क छ । २ महिना बितिसक्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु अहिलेको गठबन्धनको अक्षम कदम भएको भट्टराईको भनाइ छ ।
बाग्मती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालीन समयका लागि स्थगित
मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक अनिश्…
विश्वासको मत नपाउने भएपछि बाग्मतीकी मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा दिँदै
शिव चौलागाईं अल्पमतमा परेकी बाग्मती प्रदेश सरकारकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीन…